(L) စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေတွင်ကြီးပြင်းလာသည့်ကြွက်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းလက္ခဏာကိုသူတို့၏ခွေးများထံလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည် (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောက်တွင်ကြီးပြင်းကြွက်အဖြစ်ပိုပြီးချက်နဲ့များမှာလူကြီးများနှင့်၎င်းတို့၏ခွေးများမှအပေါ်သဘောကိုဤ pass လိမ့်မည်။
ကိတ် Yandell by | နိုဝင်ဘာလ 18, 2014
လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကိုအလွန်ငယ်ရွယ်တိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်လူသားများတွင်ကြုံတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုအကြာတွင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံမှတစ်ဆင့်အမျိုးအနွယ်မှအပေါ်လွန်နိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုကျန်းမာရေးအပေါ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။ ဒါပေမယ့်ကြွက်တွေမှာအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ယနေ့ (နိုဝင်ဘာလ 18) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည်ခွေးများမှအပေါ်လွန်နိုင်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုလည်းရှိနိုင်ပါသည် သဘာဝတရားဆက်သွယ်ရေး။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့အပြုအမူစောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင်းတာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းအလေးပေးအထီးကြွက်များ၏ခွေးများ, အပြုအမူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိကြ၏။ ထိုခွေးများစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သော mineralocorticoid receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အတူဆက်နွယ် histones ၎င်းတို့၏ hippocampi အတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံပြောင်းလဲခဲ့သည်။
"လူတွေကစိတ်ဖိစီးမှု၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်မှလွန်နိုင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြသပြီးပါပြီ" ဟုပြောသည် Deena Walker ကအဆိုပါသုတေသနတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ခဲ့သူကိုနယူးယောက်စီးတီးရှိဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်းတစ်ဦးမှ neuroscience postdoc ။ "ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ပါပဲ။ ။ ။ အခုငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာ, လွန်ခံရစိတ်ဖိစီးမှုသူတို့အားအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုအချို့မြင်နေပါတယ်။ "
"စိတ်ဒဏ်ရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခြုံငုံအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် [က] လည်းအချို့သောအပြုသဘောနှစ်ဖက်ပေးစေခြင်းငှါ," လေ့လာမှု coauthor ကပြောပါတယ် Isabelle Mansuy, Zurich တက္ကသိုလ် neuroepigenetics တစ်ဦးပါမောက္ခနှင့်နည်းပညာဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ် Institute မှ။
Mansuy နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှစ်ပတ်ခန့်မှန်းရခက်မိခင်စိတ်ဖိစီးမှု (MSUS) နဲ့ပေါင်းစပ်ခန့်မှန်းရခက်မိခင်ခွဲခြာမှမွေးကင်းစကြွက်မပြုလုပ်ရပါ။ MSUS ခန့်မှန်းရခက်ကြားကာလမှာခွေးများ '' မိခင်ပျောက်တာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကျဉ်းကျုတ်ပြွန်တွင်သို့မဟုတ်ရေအေး၏ခွက်ထဲတွင်နေရာခံရအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ, ၎င်းတို့၏မိခင်များအောက်ပါဝငျ။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် "အစောပိုင်းလျစ်လျူရှုနှငျ့ပတျသကျသောအသက်, ခန့်မှန်းရခက်ခြင်း, စိတ်မချရစောင့်ရှောက်မှုကာလအတွင်း hectic အခြေအနေများပုံတူပွားဖို့ကြိုးစားနေ" ခံခဲ့ရသည် Mansuy ကဆိုသည်။
အဆိုပါသုတေသီများထို့နောက်ရေနှင့်စားနပ်ရိက္ခာရဖို့လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှသူတို့ကိုမလိုအပ်သောကြွက်ပြည့်စုံတာဝန်များကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့အလင်းဖြင့်အချက်ပြတဲ့နှောင့်နှေးပြီးညာဘက်ကိုအခြိနျမှာအပေါက်တစ်ပေါက်သို့၎င်းတို့၏နှာခေါင်းပွူလျှင်ဥပမာ, တဦးတည်းတာဝန်ထဲမှာ, ကြွက်အကျိုးကိုတယ်။ နှောင့်နှေးတိုတောင်းခဲ့တဲ့အခါ, ထိန်းချုပ်မှုနှင့် MSUS ကြွက်အလားတူလုပ်ဆောင်ပေမယ့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့နှောင့်နှေးအတူအသက်တာ၌အစောပိုင်းအလေးပေးခဲ့ကြောင်းကြွက်ထိန်းချုပ်မှု outperformed ။ သုတေသီ MSUS ရိုင်း-type အမျိုးအစားအမျိုးသမီးနှင့်အတူကူထီးရပ်ကြီးသောအခါ, ရရှိလာတဲ့အမျိုးအနွယ်အလားတူနှာခေါင်း Poke စမ်းသပ်မှုမှာလွန်ကဲ။
ဤအတာဝန်များကိုအထီးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းနှောက်ယှက်နိုငျသောအုပ်စုတစုအိတ်များအတွက်အိမ်ရာကြွက်မလိုအပ်ကတည်းကအဆိုပါသုတေသီများသည်လည်း, သာအမျိုးသမီးခွေးများနှင့်မျှမတို့သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူအချို့သောစာမေးပွဲများဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေလှောင်အိမ်ဆန့်ကျင်ဘက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှစ်ယောက်တို့ထောင့်သွားရောက်ခြင်းအကြား alternated လျှင်တဦးတည်းစမ်းသပ်မှုမှာကြွက်တွေကပထမဦးစွာသောက်တယ်။ သူတို့လှောင်အိမ်၏အခြားနှစ်ဦးကိုထောင့်အကြားထောင့်ဖြတ်ပြောင်းရွှေ့လျှင်နောက်ပိုင်း, တိရစ္ဆာန်ကိုသာဆုလာဘ်တယ်။ MSUS ကြွက်၏သမီးကိုအောင်မြင်စွာပိုပြီးမကြာခဏထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များကိုပြု၏ထက်တာဝန်များကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
"ငါ [MSUS] စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပေးသည်ထင်ပါတယ်" Mansuy ကဆိုသည်။ "[ကြွက်] သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထိခိုက်အခြေအနေများအတွက်ထားပါပြီ။ ။ ။ သူတို့ဘဝတစ်နည်းနည်းနဲ့ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့အခါပိုကောင်းဖြစ်မဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုး။ "
အဆိုပါသုတေသီများဘေးကကြွက်လေးလည်းနှင့်ဤအမူအကျင့်စရိုက်များပေါ်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထွက်ထားကြ၏။ သူတို့ဟာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားသောအဆိုပါ mineralocorticoid အဲဒီ receptor ၏စကားရပ်ဆနျးစစျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူတို့က MSUS ကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏ခွေးများ၏ hippocampi အတွက် underexpressed ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုများအကြားနှင့် mineralocorticoid အဲဒီ receptor မှာကြွက်အလေးပေးနေချိန်တွင် DNA methylation အဆင့်ဆင့်အလားတူခဲ့ကြသည်, acetylation နှင့်နှင့်အနီးအနားရှိ histones ၏ methylation အချို့ကိုမျိုး MSUS ကြွက်၏သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်လျှော့ချခဲ့သည်။
သုတေသီ acetylation နှင့် methylation ပိတ်ဆို့ကြောင်းအင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူကြွက်ထိုးသွင်းသောအခါ, mineralocorticoid အဲဒီ receptor ရဲ့စကားရပ်ဖိနှိပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဤအင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူကြွက်ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် mineralocorticoid အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့သည့်အခါထိုနည်းတူစွာသည်, ကြွက်တို့သည် MSUS ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသူတို့အားအလားတူအပြုအမူအပြောင်းအလဲများပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် "မျိုးသူတို့ကဖိအားနှင့်မြင်ချင်ပါတယ်သောတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားဖို့ pharmacological inhibitors အသုံးပြု. တကယ့်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်," Walker ကပြောခဲ့သည်။
ဒါဟာအလေးပေးအထီးကြွက်ခွေးများသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေအပေါ်ရှောက်သွားအတိအကျဘယ်လိုရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါသုတေသီများအလေးပေးဘိုးဘေးများ၏သုက်ပိုးဟာ mineralocorticoid အဲဒီ receptor များအတွက်ကမကထအပေါ် DNA methylation ခြီးမွှောကျခဲ့ကွောငျးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စာရာသည် KimminsMontreal မြို့ McGill တက္ကသိုလ်မှပီဂနြလေ့လာနေသူတစ်ဦးမျိုးဆက်ပွားဇီဝဗေဒပညာရှင်, ထို DNA methylation တွေ့ရှိချက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်မတှေ့ခဲ့ပေ။ "သင်၏ methylation သင့်ရဲ့ assay သင့်ရဲ့အမှားအတွင်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ ထို့အပြင်သူမသည် methylation အဆင့်ဆင့်သူတို့တစ်တွေသိသိသာသာဇီဝအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြသောကြောင့်အနိမ့်ခဲ့ကြဟုဆိုသည်။
Mansuy သည်အခြားဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုများစွာကိုလည်းရိုထုတ်လွှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သူမ၏ဓာတ်ခွဲခန်းထဲကယခင်အလုပ်သုက်ပိုးအတွက် noncoding RNA များစွာသောအပြောင်းအလဲများကိုနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး စိတ်ဒဏ်ရာများ၏သက်ရောက်မှုများထုတ်လွှင့် သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖြတ်ပြီး။
ဘယ်လိုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံသုက်ပိုးအတွက်ကြက်ဥအကာ fertilization မသိရသေးပေအပြီးတွင်လာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု reprogramming လွတ်မြောက်ရန်။ နောက်ဆက်တွဲမျိုးဆက်အပေါ်မိဘ၏စိတ်ဖိစီးမှုရှိခြင်းသက်ရောက်မှု၏အထွေထွေဖြစ်ရပ်ဆန်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, Kimmins ကဆိုသည်။ "ဒီမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ကဖြစ်ပျက်နေသည်ဘယ်လိုနေသလဲ?"
Mansuy သူမ၏ဓာတ်ခွဲခန်း MSUS ၏သက်ရောက်မှုအနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှကူးစက်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ကပြောသည်။ ယခုအဘို့, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသုတေသနပညာရှင်များကလျစ်လျူရှုရဲ့အနည်းငယ် Silver Linings အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းအကြံပြု. "ဒါဟာအမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကွောငျး, ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုအပေါ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကွောငျး, ထိုသို့အစဉ်အဆက်ကိုဖြတ်ပြီးမှတဆင့်ကူးစက်သောသည်ကိုသိမြင်ရန်အံ့သြစရာပဲ" ဟု Mansuy ကဆိုသည်။
K. Gapp et al ။ , "ဘိုးဘေးငယ်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲမှာအမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်" သဘာဝတရားဆက်သွယ်ရေး, Doi: 10.1038 / ncomms6466, 2014 ။